Khasaaraha. , , , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Markii aan dharkeyga safarka u xirxiray safar, waxaan ogaaday in dhididka aan ugu jeclaa uu ka dhammaaday oo aan ku dhex laalaadayn sariirkeyga sida caadiga ah. Waan raadiyey meel kasta laakiin ma helin. Waa inaan uga tagey hudheel safar kale. Markaan xirxiray ciyaarta ugu sarreysa waxaanan helay wax kale oo aan u labisan karo.
Ma jecli in wax lumo. Waa jahwareer iyo is-duubid, gaar ahaan markay mudan tahay wax. Wax luminta ayaa ah isku xiridda dareemayaasha, sidoo kale waxay iloobeysaa meesha aad wax dhigtid, sida furayaasha ama waraaqaha muhiimka ah. Dhaca tuug ayaa ka sii dara. Xaaladaha noocaas ah waxay kaa dhigayaan inaad dareentid caawimaad la'aan iyo inaad xakamayn karin noloshaada. Inta badan waqtiga ma jiraan wax aan qaban karno mooyee oo aan aqbalno khasaaraha oo aan horay u sii soconno.
Guuldaradu waa qayb nolosha ka mid ah oo aan jeclaan lahayn in la'aanteed la helo, laakiin dhammaanteen waan la kulannaa. Wax ka qabashada iyo aqbalida luminta waa cashar ay tahay inaan hore u baranno iyo badanaa. Laakiin xitaa da'da duqowda iyo khibrada nolosha iyo ogaashada in wax fudud yihiin in la beddelo, luminta ayaa wali ah mid niyad jab leh. Khasaaraha qaar, sida luminta funaanad ama fure, way fududahay in la aqbalo marka loo eego khasaaraha weyn, sida luminta awooda jirka ama qof aad jeceshahay. Ugu dambeyntiina waxaa jira khasaare nolosheenna ah. Sideen ku ilaalin karnaa aragtida saxda ah halkaas? Ciise wuxuu nooga digay inaanan dhigin qalbiyadeenna iyo rajadeenna khasnadaha bulsheed, khasnadaha lumay, la xaday ama gubay. Nolosheenna ma ahan waxaan haysanno. Qiimaheena laguma cabiro qaddarka koontada bangigayaga joie de vivrena laguma gaaro kaydinta alaabta. Khasaaraha ka badan ee xanuunka leh ma fududa in la sharraxo ama iska iloobo. Maydka gabowga, u cararaya awoodaha iyo dareenka, dhimashada asxaabta iyo qoyska - sidee wax uga qabannaa?
Nolosheenu waa duulitaan waxayna leeyihiin dhammaad. Waxaan nahay sida ubax soobaxday subaxdii oo aroortii engegay. In kasta oo taasi aysan dhiirrigelin, ereyada Ciise waa: Waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Noloshiisa oo dhan ayaa dhammaanteen lagu soo celin karaa, dib loo cusbooneysiin karaa oo dib loo soo furan karaa. Erayadii gabaygii hore ee injiilka waxaa lagu odhanayaa: Sababta oo ah Ciise wuu nool yahay, anigu maanta sidoo kale waan noolahay.
Maxaa yeelay isagu waa nool yahay, khasaaraha maanta wuu lumiyaa. Ilmo kasta, qaylo kasta, cabsi kasta, cabsi kasta iyo xanaaq kasta wuu baabi'iyaa oo waxaa lagu beddelaa joie de vivre iyo jacaylka aabaha.
Rajadayadu waxay ku jirtaa Ciise - dhiiggiisa nadiifinta, nolosha dib loo soo nooleeyay iyo jacaylka isku duuban. Wuxuu naftiisa lumiyey annaga oo idhi haddaan nolosheenna luminno mar kale ayaan ka heli doonnaa isaga. Wax kastaaba waa lumiyaan dhinacan jannada ah, laakiin wax walbaa waxaa laga dhex helayaa ciisooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobayaankuumidoola, wal fakkaata.